AutoKey: fitaovana mandeha ho azy asa ilaina ho an'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | 25/08/2021 06:00 | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Rehefa misy izany mandeha ho azy asa (hetsika na fihetsika) amin'ny solosaina, dia misy foana ny tanjon'ny fampitomboana ny vokatra an'ny mpampiasa. Ary rehefa mandroso matetika ireo mpampiasa ireo, toy ny an'ny Mpitantana, Developers na DevOps mpizara ary ny hafa mifandraika amin'izany, satria matetika no ampiasaina ny fampiharana ny vokatra. Toy ny mpandefa fampiharana karazana Ulauncher o Task Automators karazana "AutoKey".
Ary amin'ny tranga "AutoKey", Tsara homarihina fa ity dia a fampiharana birao loharano misokatra izay manampy amin'ny fanamorana automatique ireo asa miverimberina mora sy haingana.
Ary alohan'ny hamaritana "AutoKey" ary hijery ny fomba mametraka sy mampiasa, toy ny mahazatra dia hiala eo ambany avy hatrany isika, rohy vitsivitsy mifandraika amin'izany lahatsoratra teo aloha mifandraika miaraka amin'ny hafa fampiharana famokarana izay efa noresahintsika teo aloha, mba hahafahan'izy ireo mizaha mora kokoa aorian'ny faran'ity boky ity:
"Ny mpandefa fampiharana (mpandefa) dia fitaovana na famenon-javatra izay ampiharintsika matetika ao amin'ny Operating Systems mba hanatsarana ny vokatra, amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fanamorana sy ny hafainganana amin'ny fampiasana ny fitendry hanatanterahana hetsika. Fihetsika izay tena ilaina tokoa, indrindra fa raha tsy ny Desktop Environment (DEs) dia mampiasa Window Manager (WMs) isika. Ary eo amin'ny tsara indrindra farany azontsika lazaina momba an'i Ulauncher, izay mpandefa fampiharana haingana ho an'ny Linux. Voasoratra amin'ny Python izy io, mampiasa GTK +." Ulauncher sy Synaps: mpandefa fampiharana 2 tsara ho an'ny Linux
1.1 Inona ny AutoKey?
1.3 Fa maninona ny AutoKey dia fampiharana tsara ho an'ny SysAdmins?
1.4 Fametrahana sy fampiasana
1.6 Fampahalalana misimisy kokoa
Inona ny AutoKey?
Araka ny hevitry ny Tranonkala ofisialin'ny "AutoKey" ao amin'ny GitHub, ity fampiharana ity dia faritana fohifohy toy izao:
"Fitaovana mandeha amin'ny birao ho an'ny Linux sy X11 izy io."
Ary ampian'izy ireo koa fa:
"Izy io dia miasa eo ambanin'ny Python 3. Ary satria fampiharana X11 izy dia tsy hiasa 100% amin'ny fizarana GNU / Linux izay mampiasa Wayland amin'ny toerana misy azy fa tsy Xorg."
Manolotra sehatr'asa tsotra sy intuitive mpampiasa graphique izay mitondra script Python-3 izy ary manitatra fanitarana lahatsoratra, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny fizotran'ny makro sy ny bokotra.
Azo ampiasaina amin'ny fanitarana lahatsoratra tsotra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny "Phrases". Raha ny fihetsika maneho hevitra amin'ireo hitsin-dàlana fitendry (oh [Ctrl] + [Alt] + F8), ho an'ireo fehezanteny manitatra.
Izy io dia mamela, raha ilaina, hampiasa ny herin'ny fiteny fandaharana Python hanoratanao Scripts amin'ny Python3 hamelona ireo asa ilaina. Ny script AutoKey ary koa ny andian-teny dia azo ampifandraisina amin'ny fanafohezana sy ny hotkey, ankoatry ny zavatra hafa, mba hanatanterahana baiko.
Manome API ho an'ny fifandraisana amin'ny rafitra, manao zavatra toy ny fipihana ny totozy na fanoratana lahatsoratra amin'ny klavier.
Fa maninona ny AutoKey dia fampiharana tsara ho an'ny SysAdmins?
Samy tsara Sysadmins Tahaka ireo matihanina amin'ny informatika mandroso hafa, matetika izy ireo dia manana fahatakarana fototra lozisialy momba ny programa na lozisialy. Noho izany, ankoatry ny zavatra maro, dia mazàna manana fahatakarana tsara momba ny fiasa / fitondran-tena amin'ny fitaovana / fitaovana isan-karazany sy rindrambaiko mifandraika amin'izany izy ireo mba hametrahana sy hamahana olana.
Fa koa, matetika izy ireo dia mahay amin'ny karazany maro programming languages ampiasaina amin'ny scripting na mandeha ho azy asa mahazatra toy ny Shell, AWK, Perl, Python, ankoatry ny hafa. Rehetra mba automate araka izay azo atao, mahafehy tsara indrindra fiteny sy baiko fanoratana, hanovana ireo asa matetika sy mankaleo ho asa mandeha ho azy.
Ho fisintomana dia azonao atao ny misintona ny 3 fisie amin'ny endrika .deb ilaina ary misy amin'ny fizarana fampidinana anao, mifanaraka amin'ny farany anao kinova ankehitriny (0.96 beta-8), ary apetaho amin'ny anao avy eo GNU / Linux Distro, toy ny amin'ny tranga azo ampiharina. Na izany aza, ny roa (fonosana gtk sy qt) na ny 1 amin'ny roa na 2 ihany no azo apetraka arak'izay takiana.
Rehefa avy alaina ao amin'ny Fampidinana fampirimana, ity manaraka ity dia azo atao amin'ny terminal baiko baiko:
Avy eo tantano amin'ny alàlan'ny Menu ho an'ny fampiharana ary fandaharam-potoana a andianteny na script mampiasa ny Fiteny Python. Amiko, asio fandaharana manaraka ity: Ampandehano ny lalao Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe 4 miaraka amin'ny fanalahidy Ctrl + 4. Hetsika izay novonoina tamin'ny tanana tamin'ny alàlan'ny fanokafana tranokala, fikarohana ny fampirimana loharano ary kitiho ny rakitra azo tanterahina.
Kaody Python voalamina
Raha mila fanazavana fanampiny momba "AutoKey" Manoro hevitra izahay hizaha ireto rohy 3 manaraka ireto:
Fanampiana an-tserasera: AutoKey
Kaody Google: AutoKey
Raha fintinina, toy ny efa hita "AutoKey" tena ilaina io fitaovana mandeha ho azy asa, izay miasa ihany koa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Fiteny Python. Ary raha ampiasaina tsara dia mety ho lasa fitaovana manova hanatsara ny antsika izy io vokatra na avelao fotsiny izahay hampihena ny adin-tsaina mifandraika amin'ny fanoratana. Ho fanampin'izay, mety ho fampiharana mpiray tsikombakomba sy mifameno amin'izay Scripting Shell tsy azo ampiharina na azo atao ny mandeha ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » AutoKey: fitaovana mandeha ho azy asa ilaina ho an'ny GNU / Linux